မြန်မာသံရုံးရှေ့ မွတ်ဆလင် များ ဆန္ဒပြ ~ Myanmar Express
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့က မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ သဘောထားတင်းမာသူ မွတ်စလင် အဖွဲ့ဝင် တွေက ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အစ္စလမ် ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး ( FPT ) နဲ့ ( JAT ) စတဲ့ အဖွဲ့တွေက လူ (၃၀၀) လောက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်နေတဲ့ ကိစ္စ ရပ်ဆိုင်းရေး ဆိုပြီးဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က မြန်မာသံရုံးအရာရှိတွေ နဲ့တွေ့ဆုံလိုကြောင်း အသံချဲ့စက်ကတဆင့် ခြိမ်းခြောက် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း အေအက်ပီ သတင်း က ဖေါ်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (၅၀)လောက် စောင့်ကြပ်ပေးနေတဲ့ မြန်မာသံရုံးထဲကို ၀င်ရောက် ဖို့မကြိုးစားဘဲ၊ ကုလသမဂ္ဂရုံးတစ်ရုံးဆီကို ဆန္ဒုပြဖို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအတွင်း အာရပ်စောဘွားများနိုင်ငံ ( UAE ) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ ဖိနှိပ် ခံနေတဲ့ကိစ္စ ရပ်ဆိုင်းရေး အတွက် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ ကို မနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း KUNA ကူဝိတ် သတင်းဌာန က ဖေါ်ပြပါတယ်။ Myanmar Express
Posted in: ကမ္ဘာ့သတင်း,သတင်း,မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
Rohingya.Bangali.Muslin are Lee Pal.Fuck You Isalum
15 July 2012 19:29
15 July 2012 20:00
ဒီကတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံထဲခိုးဝင်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုအဲဒီ နှစ်နိုင်ငံ ကိုပို့ပေးလိုက်ပါ။
15 July 2012 21:39
All Rakhine people and Myanmar people must unite and protest at Indonesia Embassy and Bangladesh Embassy also.
15 July 2012 23:08
ရိုဟင်ဂျာကို မသတ်စေချင်ရင် မင်းတို့နိုင်ငံခေါ်ထားပြါလားကွ မခေါ်ရင်တော့ သတ်မှာဘဲ
15 July 2012 23:47
ဒလိုင်းလားမား အတွက်။ တိဘက်အတွက် ၊ဖြိုချဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အာဖဂန်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆင်းတုတော်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ကုလားသံရုံးတွေရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြကြစို့ ။ ။
16 July 2012 02:22
မေမေစု ကခေါ်ချင်နေမှတော့ ငါတို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ငါတို့ မေမေစုယောက်ကျားကလည်း မွတ်ဆလင်ဆိုတာ မေ့နေပီလား
16 July 2012 06:56
All Rakhine people and Myanmar people must unite and protest at Indonesia Embassy and Bangladesh Embassy in Myanmar also.
16 July 2012 07:14
ရန်ကုန်က ကုလားသံရုံးတွေမှာ ဆန္ဒပြပွဲပြန်လုပ်ရမယ်။အစ္စလာမ် နိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီ၊ပုထိုး၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆောက်ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုရမယ်။
16 July 2012 08:59
ဆွေး နွေး ကြ ကွာ မ ခံ နိုင် ရင် ခေါ် ထား ကြ ဒို့ သ မ္မ တ ကြီး က သ ဘော ထား ကြီး လို့ ငါ တို့ သ ဘော ဆို ရင် ရခိုင် မှာ ဘင် ဂါ လီ ကု လား မျိုး ပြု တ် တာ ကြာ ပြီ့
If the musilm countries attack with ghad war on Myanmar.How many hours your burmese people can defend?
16 July 2012 09:56
အမေစုကို ပြန်ပို့လိုက်ရအောင်အမေစုမရှိရင် ကုလားလည်းမရှိတော့ဘူး
16 July 2012 12:41
ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ကုလားဆိုးတွေ အင်ဒိုနီးရှားကိုလှေတွေနဲ့ခိုးဝင်ဘူးတာဘဲ၊ သူတို့ရော လက်ခံလို့လား။ ဒီကုလားဆိုး တွေကို သနားတဲ့နိုင်ငံရှိရင် ပို့ပေးလိုက်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ လုံးဝ လက်မခံဘူး။
Only unwise stupid people will believe that Daw Su's late husband was Muslim. he even changed from Christian to Buddhist after marraige ( he embraced monkhood at Chan Myae Yeik thar-Ygn) and wrotealot of books about Buddhism in his research period. Just type his name Michael Eris in Wikipedia or in yahoo and get knowledge. If you are purposely sprreading false news, the writers just go to hell.
I also totally oppose those people (rohinja..bangali.,.etc) and love to keep our Rakhine people peaceful and safe. but please DO NOT mix this case with daw SU.. totally non-sense..
16 July 2012 17:34
ငါလိုးမသားတွေ လီးဖြစ်နေလား စောက်ကုလားစုတ်တွေ မကျေနပ်ရင် ၀တ်သားစားမလား
16 July 2012 18:43
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများကို သက်တမ်းတိုးရန် ထောက်ခံတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ပြောကြား
[image: မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများကို သက်တမ်းတိုးရန် ထောက်ခံတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ပြောကြား Thursday, May 23, 2013 မြန်မြာ့...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီနှင့် အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းတို့က ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်
နေပြည်တော် မေ ၂၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မေ (၂ဝ) ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ (၅) နာရီ မိနစ် (၂ဝ) တွင်...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်သို့ သုံးရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရက်အို ဘားမားနှင့် အိမ်ဖြူတော်၌ တွေ့ဆုံရန် အမေရိကန် ပြည်ထောင် စုသို့ သုံးရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့သော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ...